Lagni Hawaas guutee ummatarra garagaluun 3000 ol qe'ee irraa buqqise - BBC News Afaan Oromoo
14 Fuulbaana 2017
Madda suuraa, Addisu Arega Kitesa
Lubbuu namaa baraaruun danda'amullee loon hedduu qe'eedhuma lolaan liqiifame keessa jiru.
Rooba cimaa torbeewwan darbe roobeen lagni Hawaas guutuu isaatiin lolaan gandoota 12 irra garagalee, jiraattota 3,000 ol qe'ee isaanirraa wayita buqqaasu, oyiruu, lafa dheedumsaa fi bineeldoota aanaalee Walmaraa, Ejeree fi Sabbataa-Hawaas irra miidhaan cimaa geessise.
"Balaan lolaa tibbanaa qabeenya caalaa lubbuu keenyaaf nu sodaachisaa jira," jedhu qonnaan bultootni aanaalee Walmaraa fi Sabbataa-Hawaas.
Gandoota aanaa Sabbataa-Hawaas sadi keessatti qofaa midhaan lafa hektaara kuma tokko fi dhibba lamaa ol ta'urra ture guutumaan guututti balleessee jira.
"Wayita ammaa jiraattonni gandoota kanaa 3,662 ol miidhaan tokko utuu irra hin gahiin baraaramanii deeggarsi barbaachisu godhamaafii jira" jechuun dubbii himaan mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Addisuu Araggaa fuula feesbuukii isaanirratti barreessaniiru.
Yeroo ammaa lubbuu namaa baraaruun danda'amullee loon hedduu qe'eedhuma lolaan liqiimfame keessa jiru.
Aanaa Walmaraatti qonnaan bultoonni ganda Gabaa Kamisaa "sababa lolaa torbeewwan lamaaf ganda keenya liqimsee jiruun baanee galuu hin dandeenye, oyruu fi midhaan mana keessaa akkasumas bineeldoonni nu harkaa barbadaa'aniiru" jedhu.
"Qamadii fi Xaafiin lafa hektaara lama irratti facaasee ture gutumaan guututti na jalaa barbadaa'e" jedhan qonnaan bulaan gandichaa haasofsiisne tokko.
Lafi dheedumsaa lolaan liqimfamuun, riiqichoonni caccabuu fi bineeldonni akka hoolotaa fi lukkuullee dhumuun, miidhaa gurguddoo lolaan kun isaan irrattii qaqqabsiisee akka ta'e himan.
Madda suuraa, Caalaa warra Anaajinaa
Lagni Hawaas guutee gandoota naannawa sanii hedduu liqimse.
Kana malees, fooliin yaraan sababa lolaa kanaan dhufe sodaa rakkoo fayyaa cimaa uumeera.
Deeggarsi nyaataa mootummaa federaalaa irraa ergamee fi hammi deeggarsa barbaadu waan wal hin gitneef, maallaqaa ummatarraa walitti qabame akkasumas fi dhaabbilee miti-mootummaa muraasaan kennameen namoota kunneeniif nyaata dhiyeesaa jiraachusaanii, Obbo Heyyii Goonfaa itti gaafatamaan waajjira ittisa balaaf qophaa'inaa aanaa Sabbataa-Hawaas dubbataniiru.
Qaamolee sadarkaa naannootiif gabaasa gochusaanii fi deebii eeggataa akka jiranis himaniiru.
Qonnaan bultoonni aanaalee Walmaraa fi Sabbataa-Hawaas haasofsiisne akka jedhanitti rakkoo amma keessa jiran caalaa midhaan sanyiif ta'u of harkaa dhabuun hegeree isaaniif yaadda'aa jiru.